SomaliTalk.com » 2011 » December » 02
Home » Archive Maalinta December 2nd, 2011
WAXAY TABEYSAA HOGGAAMIN RUUX WADDANIYADEED LE
Hoggaamini waa maxay?. Khubarada erey bixintu, waxay ku soo uruuriyaan ereygan, awood u yeelashada dhaqaajinta koox dada, si loo gaaro danta caamka ah. Marka si kale loo dhigana, hoggaamiye, waa niyad-geliye iyo agaassime wax falgeliya. Waa qof dadka ka mida oo kulansaday dabeecad iyo farsamo hoggaamineed oo kuwa kale jecleysiisa inay dhinaciisa ku biiraan. Qofka kor u qaada argtida dadka meel fogna...
Hooyo Soomaaliyeed oo Gurmad Deg deg ah u Baahan
20/11/2011 Marwo Faadumo Maxamed oo ah Hooyo Soomaaliyeed oo gaari kula rogmadey inta u dhexeysa Magaaladda Muqdisho iyo Ceelasha Biyaha, islamarkaana ka jaban shan meelood oo qaarkood ay halis yihiin, ayaa la soo gaarsiiyey Caasimada dalka Jabuuti 25/11/2011. Shilka la soo gudboonaadey Hooyo Faadumo, wuxuu yimid iyadoo ka baxsaneysa kooxda Al-shabaab oo wiil curadkeeda ah horey ugu diley inta u dhexeysa...